အသေးစားမြို့ပြတည်ဆောက်ပုံ - နောက်ဆုံးပေါ်မြို့ပုံစံဒီဇိုင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များ
ဒါဟာသေးငယ်တဲ့ဗိသုကာများ၏ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်ဒြပ်စင်များအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးareaရိယာဇာတ်ကောင်, စကားရပ်အပေါ်ယူနှင့်, အားလုံးအထက်, အလုပ်လုပ်ဖြစ်လာသည်။
လမ်းပရိဘောဂများသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နေရာများ၊ အပင်များနှင့်အဆောက်အ ဦး များနှင့်သက်ဆိုင်သည် Spatial အမိန့်.
အထင်ရှားဆုံးအရာဝတ္ထု, အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး သို့မဟုတ်နေရာ, ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်း သေးငယ်တဲ့ဗိသုကာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များမှတ်မိနိုင်သည့်အရာဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ကောင်းပြီဒီဇိုင်း ခုံတန်းရှည်, သွန်းလောင်း, ဇယား, ပန်းအိုး နှင့်ဒြပ်စင် ကစားကွင်း ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်ပြီး ၀ ိညာဉ်အသစ်ကိုအသက်သွင်းနိုင်သည်။
အသေးစားမြို့ပြဗိသုကာ - လုပ်ဆောင်ချက်များကို
စနစ်တကျရွေးချယ်ထားသည့်လမ်းပရိဘောဂများ၊ မမြင်ရသောနည်းဖြင့်၊ အာကာသ၏ utility ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ချိန်ညှိရန်ကူညီပေးသည်.
တင့်တယ်သောနမူနာများရှိနိုင်ပါသည် ပို့စ်များမြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ် chunky အသွားအလာပိတ်ဆို့ ပန်း ပန်းများနှင့်အတူ။
ဤအမျိုးအစား၏နောက်ဥပမာတစ်ခုမှာသစ်ပင်အဖုံးများဖြစ်သည်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်သူတို့၏အခေါက်များကိုကာကွယ်ရန်၊ ပျက်စီးခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်နှင့်သီးခြားအလှဆင်ခြင်းများဖြစ်သည်။
ခုံတန်းရှည်များအပြင်မြို့ပြနေရာများကိုအသုံးပြုသူများသည်နေရောင်ခြည်နှင့်ရင်ဆိုင်ရမည့် Boulevard တွင်သာမကပင်လယ်ကမ်းခြေရှိပန်းခြံများတွင်နေရောင်ခြည်သုံးဥယျာဉ်များကိုအသုံးပြုလိုကြမည်မှာသေချာသည်။
ကုမ္ပဏီသည်ခေတ်မီလမ်းပရိဘောဂထုတ်ကုန်များ၏ ဦး ဆောင်ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်သည် စီးတီးပုံစံဒီဇိုင်း.
သူနဲ့တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်တယ် ဗိသုကာစတူဒီယို သေးငယ်တဲ့ဗိသုကာဒြပ်စင်များ၏အကောင်းဆုံးစတိုင်နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်များရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက်နှင့်ဒီဇိုင်နာများ။
ထို့အပြင်၎င်းကိုထောက်ခံသည် ရှုခင်းဗိသုကာအသင်းတိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များပေးခြင်း။
စီးတီးဖိုရမ်ဒီဇိုင်းသည်ပိုလန်နိုင်ငံရှိအီတလီကုမ္ပဏီများ၏အထူးသီးသန့်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ Metalco, Bellitalia နှင့် စီးတီးဒီဇိုင်း.
Metalco - သံမဏိနှင့်သစ်သား
အဓိကအားဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစားများဖြင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ သေးငယ်တဲ့ဥယျာဉ်တော်ဗိသုကာ နှင့် နည်းနည်း မြို့ပြဗိသုကာ.
Metalco ၏ကမ်းလှမ်းချက်သည်အလွန်ကောင်းသည် ဖြေရှင်းနည်းများ ပန်းခြံများ၊ လမ်းများ၊ ဥယျာဉ်များနှင့်မီးရထားဘူတာများကိုစတိုင်ကျ။ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
Metalco သည်ဥယျာဉ်ခုံတန်းရှည်များ၊ ဥယျာဉ်ခုံတန်းရှည်များ၊ မြို့တော်ခုံတန်းများ၊ ဘူတာရုံခုံများ - သစ်သားနှင့်သံမဏိခုံနှစ်ခုလုံးကိုထုတ်လုပ်သည်။
ထို့အပြင်ဤကုမ္ပဏီ၏အမျိုးအစားတွင်လမ်းတောင်းများ၊ တိုင်များ၊ သတင်းအချက်အလက်ပျဉ်ပြားများ၊ သစ်ပင်ဖုံးများ၊ ပန်းအိုးများ၊ စက်ဘီးစင်များ၊ မြက်ခင်းပြင်များနှင့်လမ်းပရိဘောဂအမျိုးမျိုးတို့ပါဝင်သည်။
Bellitalia - ကွန်ကရစ်နှင့်ကျောက်တုံးများ
Bellitalia ဥရောပထိပ်တန်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည် မြို့ပြကွန်ကရစ်စုစုပေါင်းနှင့်သဘာဝကျောက်သေးငယ်တဲ့ဗိသုကာနှင့်ရှုခင်းဗိသုကာ၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်များအတွက်လူသိများ။
ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်လည်ပတ်နေပြီးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်းများနှင့်ခွဲခြားထားသည်။
လမ်းပရိဘောဂများ စီမံကိန်းများ Bellitalia ကုမ္ပဏီများသည်အဓိကအားဖြင့်ကွန်ကရစ်ပန်းခြံ၊ ဥယျာဉ်နှင့်မြို့၏ခုံတန်းရှည်များဖြစ်သည်။ အဆောင်ခုံတန်းရှည်မကြာခဏသီးခြားပန်းပုဖန်တီးတစ်ခုတည်း, ထိရောက်သောသွန်းဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင် Bellitalia သည်ကွန်ကရစ်နှင့်ကျောက်စိုက်သူများအတွက်ပန်းတစ်ပွင့်နှင့်ပန်းပွင့်များသာမကအလှဆင်သည့်သစ်ပင်များအတွက်ပါပေးသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Bellitalia အတွက်အထူးပြုသည် ဥယျာဉ်များနှင့်ကစားကွင်းများပေါ်တွင်အသွားအလာကိုခွဲခြားခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းများ၊ ကွန်ကရစ်၊
စီးတီးဒီဇိုင်း - ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်း
အသေးစားဥယျာဉ်ဗိသုကာ, မှတ်တိုင်ပျဉ်ပြား, ဖက်ရှင်အရောင်များအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပျဉ်ပြား။
ပန်းခြံသည်ခေတ်မှီဒီဇိုင်းနှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုရှိသောခုံတန်းရှည်များ။ အလှဆင်ဒြပ်စင်, ပန်းပွင့်အိုး, ဖုန်, ဘတ်စ်ကားအမိုးအကာ, ဒါမှမဟုတ် ပို့စ်များကိုတားဆီး လမ်းအသွားအလာသည်ကုမ္ပဏီ၏မြို့ပြရှုခင်းဆိုင်ရာဗိသုကာပစ္စည်းအချို့သာဖြစ်သည် စီးတီးဒီဇိုင်း.
ဒီလိုမျိုး စီးတီးဒီဇိုင်း သင်၏ထုတ်ကုန်များ၏ကြာရှည်ခံမှု၊ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ဂေဟဗေဒ၊
မြက်ခင်းပြင်အတားအဆီးသော့ခတ်ပန်းလမ်းတောင်းများဘူတာရုံခုံတန်းရှည်စီးတီးခုံတန်းရှည်ဥယျာဉ်ခုံတန်းရှည်ပန်းခြံခုံတန်းရှည်သံခုံတန်းရှည်သွန်းသေးငယ်တဲ့ဗိသုကာဖြန့်ဖြူးသေးငယ်တဲ့မြို့ပြဗိသုကာသေးငယ်တဲ့ဥယျာဉ်တော်ဗိသုကာသေးငယ်တဲ့ဗိသုကာအဆောက်အ ဦး ဥပဒေအသေးစားဗိသုကာထုတ်လုပ်သူဥယျာဉ်တော်၌သေးငယ်တဲ့ဗိသုကာလမ်းပရိဘောဂသစ်ပင်စောင့်ကစားကွင်းပို့စ်များစက်ဘီးထိန်သိမ်းသတင်းအချက်အလက်ပျဉ်ပြား